Fifidianana · Marsa, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Marsa, 2019
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Marsa, 2019
Jordania: Mpanao sariitatra politika mamazivazy ireo afisim-pifidianana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 26 Marsa 2019
Manohy mifantoka amin'ny fifidianana parlemantera amin'ny 9 Novambra ny lahatsoratr'ireo mpanoratra Jordaniana ao amin'ny media sosialy, ka mitodika amin'ireo afisim-pifidianana manerana ny firenena, ary indrindra indrindra ao an-drenivohitra Amman. Mpisera Twitter iray, Mayousef, namazivazy ny 25 Oktobra,
Inona no fantatrao momba ny fifidianana ankapobeny manaraka any Mozambika?
Mozambika 16 Marsa 2019
Hifidy ny governoram-paritra voalohany indrindra teo amin'ny tantarany i Mozambika amin'ny volana Oktobra 2019 hoavy izao . Ny filoha no nanendry izany teo aloha.
Malawi : Ny fifidianana miaraka amin’ny Aterineto
Malawi 04 Marsa 2019
Vaovao tamin'ny maro izany habaka amin'ny tranonkala izany, nandritra ny fifidianana, 10 taona lasa izay. Ankehitriny efa nivoatra tanteraka...